८ बर्षको बच्चा आगनमा झु.न्डिदा साली भेना कोठा भित्र सुतेर बसेको खुलासा, आ’रोपित साली आइन् मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
८ बर्षको बच्चा आगनमा झु.न्डिदा साली भेना कोठा भित्र सुतेर बसेको खुलासा, आ’रोपित साली आइन् मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
May 24, 2021 AdminLeaveaComment on ८ बर्षको बच्चा आगनमा झु.न्डिदा साली भेना कोठा भित्र सुतेर बसेको खुलासा, आ’रोपित साली आइन् मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी–६ मा एक जना बालकले आ.त्मह.त्या गरेको घ’टना रहस्यमय बनेको छ । जेष्ठ २ गते दिउँसो ४ बजे उर्लाबारी–६ सिमाना वस्तीमा ८ बर्षीय बालक पवन दियालीले आ.त्मह.त्या गरेपछि घ’टना रहस्यमय बनेको हो । बुवा कुमार दियाली र कान्छी आमा फुलमाया दियालीले ह.त्या गरी झु.ण्डाएर मा.रेको आमा तुलसा दियालीले आ’रोप लगाइन् ।
तुलसाले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा ज्यान मा.र्ने उद्योगमा जाहेरी दिएकी छिन् । बालक दियाली घर अगाडि सलको पासो लगाई आ.त्मह.त्या गरेको अवस्थामा श.व भेटिएको थियो । घरभित्र बुवा कुमार र साली सुतिरहेको अवस्थामा छोरा पवनले आ.त्मह.त्या गरेका थिए । आ.त्मह.त्या गरेपछि छरछिमेकी भेला भएपछि मात्रै बुवा कुमारले पत्ता पाएका थिए ।
छिमेकीहरुले समेत ८ बर्षको बालकले आ.त्मह.त्या गर्न नसक्ने र घ’टना रहस्यमय भएको बताएका छन् । यता जेठी आमा पक्षहरुले घ’टना सुनियोजित रुपमा भएको र दोषीलाई हदैसम्म का.र्वाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई माग गरेका छन् । यसै बीच आ’रोपमा परेकी साली भनिएकी रुपा पनि मिडियामा आएर यस्तो स्पष्टिकरण दिएकी छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोसः
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ १० गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २४ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस्: मिति २०७८ साउन भदौ ७ गते सोमबार, तदनानुसार सन् २०२१ अगष्ट २३ तारिख ….
आज पनि घट्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार…..
सुझवुझका साथ विवाहको निर्णय गरेका कारण अब आफु कहिल्यै दुखी हुन नपर्ने कुरामा विश्वस्त र खुशी छिन् गायिका अञ्जु पन्त ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)